ilifu vs ssd / yangaphandle yokugcina i-hdd: yeyiphi oyikhethayo ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Cloud vs SSD yangaphandle / HDD yokugcina: Yeyiphi oyikhethayo ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho
Iinkonzo zamafu ziyinxalenye yobomi babo bonke. Usenokungayiqondi, kodwa nokuba uvula iPowerPoint intetho ethunyelwe kuwe nge-imeyile (okanye ngeDropbox), wena neapos ulisebenzisile ilifu.
Kwakhona, njengoko usazi, uGoogle uzise ukugcinwa simahla okungenasiphelo kweefoto ezikumgangatho ophezulu kwi isiphelo . Oku kuqala ukusebenza namhlanje, nge-1 kaJuni. Ngelixa iifoto kunye nevidiyo akufuneki ibe kuphela kwento xa usenza isigqibo sokuba uye kwilifu okanye kulondolozo lwehard drive, ngokuqinisekileyo ziyinxalenye yomfanekiso omkhulu (i-pun eyenzelweyo).
Ke kwakhona, zininzi ezinye iintlobo zeefayile kunye nesoftware onokufuna ukuyigcina. Ngelixa ilifu linokwenza ugcino lwangaphandle lwe-SSD / HDD lubonakale luphelelwe lixesha, alukwazanga ukuyibuyisela ngokupheleleyo. Masibone ukuba kutheni, kwaye ukhethe olona khetho lufanelekileyo kwiimfuno zakho.
Yiya kwindawo yokugcina ilifu ukuba uyafuna:
Ukugcinwa kwelifu kugcinwa 'efini', okanye ngamanye amagama kumboneleli wakho kunye neseva. Ungayifikelela ngokoqobo naphina emhlabeni, nangaliphi na ixesha, nangaphandle kwesixhobo sanamhlanje esinenkqubo yokusebenza. Ifowuni yakho ye-Android, i-iPhone yakho, ithebhulethi, iPC, iMac-uyayibiza ngegama. Olu luncedo olungenako ukungahoywa.
Kwelinye icala, ukugcinwa kwe-SSD / HDD kuyinto ebonakalayo. Kuya kufuneka ukhumbule ukuthatha nayo ukuze usebenzise iifayile ozigcine apho. Iindaba ezimnandi zezokuba izixhobo ze-SSD zale mihla ziphatheka kakhulu, ngenxa yoko asizukuphatha ukuba ziyabakhathaza.
Ukusebenzisana kukhulu kwabanye abantu, kwaye ukwazi ukuthumela ngokulula ikhonkco kumhlobo wakho okanye umntu osebenza naye, onokukhuphela iifayile ngonqakrazo, alixabisekanga. Apho kulapho ukugcinwa komzimba kuqala ukuziva ngathi yinto yexesha elidlulileyo. Zininzi izixhobo zokusebenzisana. Jonga icandelo 'lokuhamba komsebenzi' ngezantsi.
Emva koko, ukuzinza kukwadidi apho ukuqhuba ngokwasemzimbeni kungakwaziyo ukuqhubeka, kuba ... bathambekele ekonakaleni. Uyazi kuphela ukuba kuthetha ntoni ukuphulukana nexabiso elibalulekileyo lweefayile, ukuba kwenzeke kuwe. Kungenxa yoko le nto abantu behlala begcina idatha exabisekileyo kuzo zombini iidrive drive, kunye neenkonzo zelifu- ngale ndlela kukho isicwangciso 'B'.
Ewe, ukugcinwa kwelifu kuhlala kusengozini yokuhlaselwa kwe-cyber, kodwa (uthinte iinkuni), ezi zinqabile kakhulu. Ngapha koko, iithagethi zolo hlaselo zihlala ziinkampani ezinkulu, hayi umthengi ophakathi. Ngamanye amagama-asizukhathazeka malunga noko.
Cinga nge-SSD / HDD ebonakalayo ukuba uxabisa:
Ekunene kwi-bat, ukufikelela kwidatha egcinwe kugcino lwasekhaya kuya kuhlala kukhawuleza kunokuyilayisha nokukhuphela efini. Ayizizo iisayensi zerokethi. Ngelixa ukugcinwa kwelifu kuyinto entle yokwabelana ngeefayile nabantu abavela kwihlabathi liphela, ayenzi thuba xa kusiza isantya kunye nokusebenza ngokukuko kwesantya sokufunda nokubhala. Qaphela ukuba i-SSD iya kuhlala ikhawuleza kune-HDD.
Ngaphandle kokufumana ubuchwephesha kakhulu, oko kuthetha ntoni kuwe kukuba ukusebenza ngeefayile kunye nokuzisebenzisa ngayo nayiphi na indlela kwenziwa ngokukhawuleza xa zigcinwa kwalapha kwiPC yakho (nokuba yeyoku & iiapos kwi-SSD yakho eyakhelweyo okanye eyangaphandle). Oku kusizisa kwinqanaba elilandelayo ...
Ukuhamba komsebenzi ngobuchule
Ubungcali obuthile bufuna ukuhamba komsebenzi othile, kunye nokugcinwa kwelifu nje ayisiyiyo khetho kubantu abasebenza kunye neeapos; ezifuna iifayile ngokungxamisekileyo '. Ewe kunjalo, sithetha badwelisi benkqubo, abahleli bevidiyo, iinjineli ezirekhodiweyo, abavelisi bomculo, okanye ngokubanzi nabani na ofuna ukusebenza ngeefayile ezinkulu ezifuna ukukhawulezisa ukufunda nokubhala.
Ukuhlela ividiyo ngokuthe ngqo kwilifu kwenziwe umbulelo ngenxa yokusebenzisana njengalowo uphakathi I-Dropbox kunye ne-Clipchamp . Ke, ngokobuchwephesha- awunakusebenzisa iifayile zakho ezigcinwe lilifu kuphela, kodwa ungahlela ngqo kwisoftware ebanjwe kwilifu. Ngelixa oku kuyamangalisa (kwaye ngokuqinisekileyo kuyathembisa ngekamva), kufanelekile kuphela ekusebenziseni ukukhanya.
Ngelixa likwazi ngokugqibeleleyo ukukhonza umntu ofuna ukugqibezela iprojekthi yesikolo okanye umsebenzi ongafunekiyo, ayisihambelani nesoftware efana neFinal Cut, okanye iAdobe Premiere.
Kukho izisombululo zenethiwekhi ezinje I-SNS , enokwenza kube lula kuwe ukuhlela ngokusebenzisana nomnye umntu (nokuba bakude), kodwa oku kwenziwa ngendlela yesiqhelo yokuphinda-phinda amathala eencwadi, kunye nokwabelana ngeefayile. Nomad (Iqonga le-SNS) lenza ukuba le nkqubo izenzekele, kwaye ibe lula, kodwa ayenzi ukuba ubambe isoftware yakho yokuhlela ividiyo kwilifu. Sisekude nale nyaniso.
Kunzima ukugweba le, kubaukugcinwa kwelifuihlala ithengiswa njengenkonzo yokubhalisela- njengeyakho Inkulumbuso yeAmazon okanye INetflix iakhawunti. Abanye ababoneleli belifu lokugcina banikezela 'ngexesha lokuphila', oko kuthetha ukuba ufumana ukuthenga (duh!). Rhoqo kuye kuthi xabiso kakhulu ukuya kubhaliso 'lobomi bonke', kuba uya kuhlawula ixabiso elifanayo kwisithuba seminyaka emi-2-3, ukuba uburhuma. Nangona kunjalo, amaxabiso 'obomi bonke' aphakamile kunobungakanani obulinganayo bokugcinwa kwehard drive ebonakalayo.
Umzekelo, ngalo mzuzu, Isamsung & iapos eyaziwayo ye500GB T5SSDiya kwi- $ 89 kwi-Amazon.com, ngelixa ubungakanani obufanayo bokugcina ilifu buxabisa phakathi kwe- $ 150-200. Ngelixa ukuyihlawulela inyanga nenyanga kunokuba sezantsi kangange- $ 3-4 ngenyanga, ungazikhohlwa izinto esizichazileyo ngentla- ukuthengwa 'kwexesha lokuphila' kukugcinela imali kwixesha elide, kwaye uceba ukusebenzisa ukugcinwa kwelifu kwixesha elizayo.
SAMSUNG T5 I-SSD ephathekayo ye-500GB
Fumana ukuzonwabisa, ikhosi, okanye imidlalo naphina, kuso nasiphi na isixhobo. Yiva inkululeko yokugcina enkulu kunye nokudluliselwa okukhawulezileyo kwiiLaptops, ii-smartphones, ii-consoles zomdlalo kunye nokunye.
Kwelinye icala, Ngqamanisa inikeza ezinye izivumelwano ezintle kunye nesisaukugcinwa kwelifuamandla ngamaxabiso asezantsi njengangoku. Umzekelo, ungahlawula i- $ 5 ngomsebenzisi, ngenyanga (ehlawuliswa ngonyaka) nge-1TB yokugcina, i- $ 8 ye-4TB, kunye ne- $ 15 ye-10TB. Ukuvumelanisa yinkonzo ejolise kwilifu. Inika amandla okwabelana ngeefayile kunye neefolda; ukhuphelo lwefayile ngexesha lenene, kwaye isiphelo sine-encrypted esiphelelweyo, okuthetha ukuba kuphela unokufikelela kwiifayile. Kukho itoni yolunye imveliso kwaye wamkele izixhobo kunye neempawu, onokuthi ujonge kwiSync.com.
Isigqibo: Yeyiphi eyeyakho
Zonke ziya kuxhomekeka kwizinto ezimbalwa ezinje:
Ufuna ntoni ukugcinwa:
A) ukusetyenziswa komntu / okuqhelekileyo
B) ishishini / ukusetyenziswa kwepro
Esona sixhobo siphambili uza kuthi sisebenzise ukugcina kunye:
A) i-smartphone / ithebhulethi
A) bathambekele ekuphulukaneni / ekubekeni ecaleni izixhobo zakho
Ukuba'TO'udidi lukuchaza olona lubalaseleyo, emva koko ungangomsebenzisi oqhelekileyo, ojonge ukufumana indawo yeefoto / iividiyo zosapho lwabo; ungumfundi; Uqhuba ishishini elifuna okuninzi, kodwa umsebenzi ongalawuleki kangako wolawulo; uyila kwaye uyathanda ukuhlela iifoto zakho (kwaye uninzi lwazo), iividiyo, okanye ipodcast kubhabho.
Yile & Apos; xa ufuna ugcino olusekwe kwilifu. Ukuba iimfuno zakho ungadluli kwi-2-10GB yokugcina, kukho iinkonzo ezimbalwa zamafu eziza kukunceda kakuhle. Umzekelo, ICloud inika abasebenzisi i-5GB okanye ukugcinwa simahla, ngelixa iAmazon Prime ikuvumela ukuba ulayishe inani elingenamda leefoto / iividiyo kwiifoto zeAmazon (ziifoto kunye neevidiyo kuphela!).
Nangona kunjalo, ukuba uwela kwi'B'isibiyeli, ke wena kunye neapos mhlawumbi yingcali ekufuneka isebenze nevidiyo enkulu, iaudiyo, okanye ezinye iifayile zemithombo yeendaba. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, aba bantu bafuna isantya sokugcina ngokukhawuleza, esinokubanceda ukuba benze izinto. Ukugcinwa kwelifu kuyinto enkulu ukuba ufuna ukwabelana ngeefayile, kunye nelayibrari yokuhlela ividiyo, kodwa ayizukuvumela ukuba uhlele ngokuthe ngqo kwilifu.
Ukuba uku'C'icandelo, wena kunye neapos; mhlawumbi siyila kakhulu, okanye ... ndididekile kakhulu (okanye zombini)! Qiniseka ukuba ugcina iifayile zakho, nokuba ukhetha yiphi indlela. Ngapha koko, eli licebiso elilungileyo kuye wonke umntu. Ungalibali ukuba uhlala ufumana i I-AirTag , Ithegi efanelekileyo , okanye Ithayile umkhondo we-SSD / HDD, ngenxa yoko awuzukuphakuzela ngalo lonke ixesha uyibeka endaweni engeyiyo.
Yintoni enye ephaya
Amakhadi amancinci e-SDbasekhona! Ngapha koko, zitshiphu kunanini na ngaphambili. Kukholelwa ukuba apile ibuyisa indawo yokubeka ikhadi leMicrosoft SD kunye nokulandelwa okulandelayo kweMacBook Pro. Ngokuqinisekileyo oku kuya kuba nefuthe elihle, kwaye kuya kunceda ukubuyisa amakhadi eMicro SD kwifashoni. Ngaba baya kuyenza kwi-iPad / kwi-iPhone? Akunakulindeleka. Nangona kunjalo, nathi besingalindelanga ukuba sibabone kwiMacBook entsha, ke ... ngubani owaziyo!
Ukuqhuba kweFlashzikwaxabiso eliphantsi kwaye ziyaphatheka. Ewe kunjalo, isantya asizukuphumelela njenge-SSD, kodwa zikulungele ukugcina iifayile ukulungiselela ukuzigcina. Ngokuqinisekileyo ngekhe uphumelele, kwaye wenza nawuphi na umsebenzi 'wokuhlela' kwi-flash drive.
Khumbula ukuba isantya sokufunda / ukubhala kwesixhobo sakho kubalulekile! Nokuba i-SSD ekhawulezayo ayizukuphumelela, ukuba ayenzi nto, ukuba iplagiwe kwizibuko elingenako ukugcina isantya sokufunda / ukubhala.
Iingcebiso ze-iphone 11 pro max
pixel kaGoogle Umhla wokukhutshwa 6
I-iPhone 12 Pro Max vs iPhone 12 / Pro / Mini: ukuthelekiswa kwekhamera
Nantsi indlela onokuthi ufumane amanqaku ePokecoins simahla kwiVenkile yeGoogle Play
I-WWDC 2021: yonke into entsha i-Apple ibhengeziwe
I-Samsung AllShare Cast Dongle media streamer ibetha abathengisi, yenza i-TV yakho esisidenge ihlakaniphe
Fumana simahla i-Samsung Galaxy S9 okanye i-S8 ngale nto imangalisayo ye-Costco / T-Mobile
Zonke ii-smartphones ze-Samsung Galaxy Qaphela i-7 ziya kuthintelwa kwiinqwelomoya ze-US
Ungayikhubaza njani iKnockON (cofa kabini ukuvuka) kwi-LG G3 kunye nezinye iifowuni ze-LG ze-Android